စနိုကျပါတှရေဲ့ လကျခကျြမမိတော့မလိုဖွဈခဲ့တဲ့ စတနျ့သမား – the One Sports Journal
စနိုကျပါတှရေဲ့ လကျခကျြမမိတော့မလိုဖွဈခဲ့တဲ့ စတနျ့သမား
ဂြာမနီနဲ့ပွငျသဈအသငျးတို့ကစားခဲ့တဲ့ ယူရိုအုပျစုပှဲမှာ ကှငျးထဲကို စတနျ့ထှငျပွီး လထေီးနဲ့ခုနျဆငျးခဲ့တဲ့ စတနျ့သမားဟာ ကံကောငျးထောကျမလို့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျစနိုကျပါတှရေဲ့ လကျခကျြနဲ့ အသကျမဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပဲဖွဈပါတယျ။
အဲဒီသူက သဘာဝပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျရေး NGO အဖှဲ့ဖွဈ တဲ့ Greenpeace အဖှဲ့ဝငျတဈဦးဖွဈဖို့မြားသလို သူက လထေီးပျေါမှာ Greenpeace လိုဂိုနဲ့အတူ “Kick Out Oil! Greenpeace”လို့ ရေးသားထားပွီး ကှငျးထဲကို မမြှျောလငျ့ဘဲခုနျဆငျးလာတဲ့အတှကျ ပရိသတျနှဈဦးထိခိုကျဒဏျရာရရှိခဲ့တာကွောငျ့ ဆေးရုံကိုပို့ဆောငျခဲ့ရပါတယျ။
ကှငျးဘေးနားမှာ လုံခွုံရေးစောငျ့ကွပျနတေဲ့ ဂြာမနျရဲတပျဖှဲ့ဝငျတှကေ အဲဒီသူကို အကွမျးဖကျသမားလို့ယူဆပွီး စနိုကျပါနဲ့ပဈမယျ့ဆဲဆဲမှာ လထေီးပျေါက Greenpeace လိုဂိုကို မွငျလိုကျတာကွောငျ့ မပဈခဲ့ပဲတာဖွဈပါတယျ။
ဂြာမနျပွညျထဲရေးဝနျကွီးဖွဈသူ ဂြိုအာခငျြဟာမနျးက “လထေီးပျေါက Greenpeace စာတနျးကွောငျ့ စနိုကျပါတှကေ အဲဒီသူကို မပဈခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဒါပမေဲ့ တကယျလို့သာ ရဲတှကေ အကွမျးဖကျသမားလို့ယူဆပွီး ပဈခတျခဲ့မယျဆိုရငျတော့ အဲဒီသူဟာ ဒီလုပျရပျကွောငျ့ သူ့အသကျနဲ့ရငျးရမယျ့အနအေထားဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ”လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ဒီစတနျ့သမားဟာ လထေီးကို ကောငျးကောငျးထိနျးခြုပျနိုငျခွငျးမရှိတာကွောငျ့ ကှငျးထဲက Spidercam ရုပျသံကငျမရာတှနေဲ့ ထိခိုကျမိခဲ့သလို မွပွေငျပျေါကခြိနျမှာလညျး ထိခိုကျဒဏျရာရခဲ့တာပါ။ အဲဒီလုပျရပျနဲ့ပတျသကျလို့ UEFA က ပွငျးပွငျးထနျထနျရှုတျခခြဲ့ပွီး “ဒီလိုစဉျးစားဆငျခွငျမှုမရှိတဲ့လုပျရပျကွောငျ့ ပှဲလာကွညျ့တဲ့ပရိသတျတျောတျောမြားထိခိုကျဒဏျရာရတာမြိုးရှိလာနိုငျပွီး အခုဆိုရငျ ပရိသတျတခြို့ ဒဏျရာရခဲ့တဲ့အတှကျ ဆေးရုံကိုပို့ဆောငျခဲ့ရပါတယျ။တာဝနျရှိသူတှအေနနေဲ့ ဒီလူကို လိုအပျသလိုအရေးယူသငျ့ပါတယျ”လို့ ကွညောခကျြထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။
Greenpeace အဖှဲ့ကတော့ ဒီအဖွဈအပကျြအပျေါ တောငျးပနျစကားဆိုခဲ့ပွီး “ဒီလိုမြိုးဆန်ဒထုတျဖျောတာက ပှဲကိုထိခိုကျဖို့ ဒါမှမဟုတျ ပရိသတျတှကေို ဒဏျရာရဖို့ရညျရှယျခကျြနဲ့လုပျဆောငျခဲ့တာမဟုတျပါဘူး။ ပရိသတျတှေ အားလုံးအဆငျပွပေါစလေို့ မြှျောလငျ့ပွီး ဘယျသူမှ ကွီးကွီးမားမားဒဏျရာမရဖို့လညျး မြှျောလငျ့ပါတယျ။
Greenpeace အဖှဲ့ရဲ့လုပျရပျတှဟော ငွိမျးငွိမျးခမျြးခမျြးနဲ့ ဘာမှထိခိုကျနဈနာမှုမရှိရအောငျပဲ ရညျရှယျပါတယျ။ ကံဆိုးစှာနဲ့ အခု စတနျ့လုပျရပျက စီစဉျထားသလိုဖွဈမလာခဲ့ပါဘူး”လို့ ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။
စနိုက်ပါတွေရဲ့ လက်ချက်မမိတော့မလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ စတန့်သမား
ဂျာမနီနဲ့ပြင်သစ်အသင်းတို့ကစားခဲ့တဲ့ ယူရိုအုပ်စုပွဲမှာ ကွင်းထဲကို စတန့်ထွင်ပြီး လေထီးနဲ့ခုန်ဆင်းခဲ့တဲ့ စတန့်သမားဟာ ကံကောင်းထောက်မလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်စနိုက်ပါတွေရဲ့ လက်ချက်နဲ့ အသက်မဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီသူက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး NGO အဖွဲ့ ဖြစ် တဲ့ Greenpeace အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ဖို့များသလို သူက လေထီးပေါ်မှာ Greenpeace လိုဂိုနဲ့အတူ “Kick Out Oil! Greenpeace”လို့ ရေးသားထားပြီး ကွင်းထဲကို မမျှော်လင့်ဘဲခုန်ဆင်းလာတဲ့အတွက် ပရိသတ်နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့် ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။
ကွင်းဘေးနားမှာ လုံခြုံရေးစောင့်ကြပ်နေတဲ့ ဂျာမန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက အဲဒီသူကို အကြမ်းဖက်သမားလို့ယူဆပြီး စနိုက်ပါနဲ့ပစ်မယ့်ဆဲဆဲမှာ လေထီးပေါ်က Greenpeace လိုဂိုကို မြင်လိုက်တာကြောင့် မပစ်ခဲ့ပဲတာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျာမန်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူ ဂျိုအာချင်ဟာမန်းက “လေထီးပေါ်က Greenpeace စာတန်းကြောင့် စနိုက်ပါတွေက အဲဒီသူကို မပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တကယ်လို့သာ ရဲတွေက အကြမ်းဖက်သမားလို့ယူဆပြီး ပစ်ခတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီသူဟာ ဒီလုပ်ရပ်ကြောင့် သူ့အသက်နဲ့ရင်းရမယ့်အနေအထားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်”လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီစတန့်သမားဟာ လေထီးကို ကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့် ကွင်းထဲက Spidercam ရုပ်သံကင်မရာတွေနဲ့ ထိခိုက်မိခဲ့သလို မြေပြင်ပေါ်ကျချိန်မှာလည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာပါ။ အဲဒီလုပ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ UEFA က ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချခဲ့ပြီး “ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုမရှိတဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် ပွဲလာကြည့်တဲ့ပရိသတ်တော်တော်များထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးရှိလာနိုင်ပြီး အခုဆိုရင် ပရိသတ်တချို့ ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အတွက် ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။
တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ဒီလူကို လိုအပ်သလိုအရေးယူသင့်ပါတယ်”လို့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Greenpeace အဖွဲ့ကတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်အပေါ် တောင်းပန်စကားဆိုခဲ့ပြီး “ဒီလိုမျိုးဆန္ဒထုတ်ဖော်တာက ပွဲကိုထိခိုက်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ပရိသတ်တွေကို ဒဏ်ရာရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ပရိသတ်တွေ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေလို့ မျှော်လင့်ပြီး ဘယ်သူမှ ကြီးကြီးမားမားဒဏ်ရာမရဖို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။
Greenpeace အဖွဲ့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ဘာမှထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိရအောင်ပဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ကံဆိုးစွာနဲ့ အခု စတန့်လုပ်ရပ်က စီစဉ်ထားသလိုဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး”လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့မှျောစှမျးဆောငျရညျကို ပွသသှားခဲ့တဲ့ နမော
စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ပွောငျးပွနျ.. ပေ့ါဘာကွောငျ့ ဟနျနီကယျ ကုမ်ပဏီ အမရေိကနျဒျေါလာ(၁)ဘီလီယံအမွတျထှကျ